News, 01 August 2018
Some local and international independent newspapers put the number of deaths at three amid reports of skirmishes between the police, members of the Zimbabwe national army and other security agents in the capital, Harare.
Zimbabwe Police Clash With Opposition Supporters as Zanu PF Wins Majority
The leader of the opposition Movement for Democratic Change, Nelson Chamisa said on Twitter he had won the “popular vote” in Monday’s parliamentary and presidential elections.
Zimbabwe Ruling Party Leading in General Elections
Zanu PF is beating the Movement for Democratic Alliance led by Nelson Chamisa mainly in rural areas, which are the ruling party’s strongholds.
Mnangagwa, Chamisa Receiving Positive Information on Election Results
Mnangagwa said on Twitter that he was delighted by the high voter turnout, which the Zimbabwe Electoral Commission put at 75 percent.
Former Zimbabwe VP Mujuru Urges Electoral Body to Disqualify Chamisa, Mnangagwa
“On July 29, at least two candidates gave statements which were published in the media and might be interpreted as campaigning ... The matters have been referred to the police for investigation for possible violation of the law."
Opposition Cries Foul as Zimbabwe Votes in First Post-Mugabe Poll
“The people’s will being negated & undetermined due to these deliberate & unnecessary delays,” Chamisa tweeted.
A frail Mugabe, accompanied by his wife, Grace, shuffled into the polling booth and spent several minutes filling in his ballot paper with the help of an assistant. A huge crowd gathered outside, some cheering, many booing.
Ahead of vote, Mugabe lashed out at ZANU-PF, the party he founded, saying it did not have his support
Mugabe Emerges on Eve of Elections, Calls for New Democratic Govt
"I thought on the eve of the great day yet to come, I should invite as many voices as possible just to hear my own feelings and the way I look forward to tomorrow. What is tomorrow going to bring us, the people of Zimbabwe?"
Former Ghana President Applauds Peaceful Zimbabwe Election Campaign
"I think it’s one of the most important elections that Zimbabwe is having historically. It is the election that is going to mark a watershed as to how Zimbabwe’s democracy has matured."
'I cannot vote for those who have tormented me' Mugabe says of his own party, on eve of critical poll
‘The challenge many election bodies have is living up to the expectation of independence and integrity’